के आँखाको ज्योति गुमाउने रहस्यमय रोग सापु सेतो पुतलीसँग सम्बन्धित छ? कसरी जोगिने? :: डा रञ्जु खरेल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
के आँखाको ज्योति गुमाउने रहस्यमय रोग सापु सेतो पुतलीसँग सम्बन्धित छ? कसरी जोगिने?
४८ देखि ७२ घन्टाभित्र उपचार भएन भने आँखाको दृष्टि नै गुम्न सक्छ
डा रञ्जु खरेल मंगलबार, भदौ २९, २०७८, १४:३८:००
प्रश्न : के आँखाको ज्योति गुमाउने रहस्यमय रोग सापु सेतो पुतलीसँग सम्बन्धित छ? यो रोग कसरी लाग्छ? यसका लक्षणहरु के के हुन्? कसरी जोगिने?
डा रञ्जु खरेलको उत्तर :
यो रोगको पूरा नाम 'सिजनल हाइपर एक्युट पनुभिआइटिस' हो। नेपालका पनि केही पहाडी जिल्लामा मात्र देखिएको यो रोग के कारणले लाग्छ भन्ने अझै पत्ता लगाउन सकिएको छैन। यसबारे अध्ययनहरु भइरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पनि विशेषगरी पोखरामा यो रोग बढी देखिएको छ।